Qaar ka tirsan taageerayaasha madaxweyne Yuusuf oo ku howlan in mar kale la soo celiyo dagaaladii sokeeye oo beelaha USC-da ku dhex maray magaalada Muqdisho 1991 iyo Xuub Sireed oo sheegay in dhawaan la soo afjari doono xaaladda cakiran ee ka taagan Xamar. Ruunkinet 09/03/07
Warar lagu kasoon yahay oo aan ka helnay magaalada Muqdisho ayaa tibaaxaya in qaar ka tirsan taageerayaasha madaweyene Cabdullahi Yuusuf ay si weyn u doonayaan in mar kale la soo celiyo dagaalladii sokeeye ee Xamar ku dhex maray taageerayashii Cali Mahdi Maxamed iyo Jeneraal Caydiid.
Warkan oo ay sheegayaan dad ku dhow saraakiisha madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa tibaaxaya in lala xiriiray qaar ka tirsan siyaasin caan ah oo ka mid ah beelihii Xamar ku dagaalamay 1991di.
Siyaasiyiintaasi ayaa la sheegay in loo ballan qaaday dhaqaale badan hadii ay ku guuleystaan in ay soo celiyaan dagaal beeleedkaasi.
Warka ayaa intaasi ku daraya in sidoo kale loo balan qaaday siyaasiyiintaasi in la siinayo taakulo militari oo isugu jira ciidan iyo hub ayagoo laga codsaday in dagaalkaasi ay ridaan inta ay ciidamada Itoobiya ku sugan yihiin magaalada Muqdisho.
Dhanka kale, Xuseen Idamaale (Xuub Sireed) oo ahaa tafatiraha shabakadda Idamaale oo dhawaan loo magacaabay afhayeenka madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in la soo afjari doono xaaladda Xamar.
Mudane Xuub Sireed oo saxaafadda la hadlayay ayaa warkiis u muuqay shaqi si weyn u doonaya in xoog lagu xalliyo xaaladda ka jirta Xamar.